DOBERMAN SHEPHERD DOG DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Doberman Shepherd Dog Dog Fampahalalana sy sary
Doberman Pinscher / Alika Mpiandry Alemanina mifangaro
Cairo the Doberman Shepherd mifangaro alika
Ny Doberman Shepherd dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Doberman Pinscher ary ny Mpiandry Alemanina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mifangaro Ella the Doberman Shepherd eo amin'ny 2 taona eo ho eo— Alika tony be i Ella. Tiany ny mihinana sy milalao amin'ny tompony. '
Zephyr the Doberman Shepherd mifangaro toy ny alika tanora ao anaty lanezy manao palitao mena— 'Zephyr dia alika mpiara-dia amin'i Blitzen, a Vizsla / Weimaraner mifangaro . Rehefa nodimandry ny alika taloha dia nitady namana ho an'ny Vizmaraner izahay. Ny renin'i Zephyr dia Doberman Pinshcer ary ny rainy dia mpiandry Alemanina AKC. Nahafinaritra azy ny nianatra sy nihaino baiko, na dia somary nanahirana aza indraindray. Te hanana asa sy zavatra hatao foana izy. Tiany ny milalao miaraka amin'ny 'anadahiny' Blitzen, ary tiany ny zanakay vavy. Izy ihany koa dia miaritra ny saka , nefa toa tsy miraharaha firy na amin'ny lafiny hafa. Izy dia spay , fa raha tsy izany tsy miova. Manana ny rambony feno izy ary ny sofiny sisa tavela. '
saint bernard sy poodle mifangaro
Zephyr the Doberman Shepherd dia mifangaro ho alika tanora
Zephyr the Doberman Shepherd mifangaro toy ny alika kely
'Kairo ity. Ny anarany dia manondro an'i Kairo, Egypt satria izy dia toa ny antsasaky ny olona / antsasaky ny amboadia avy amin'ny sary ejipsiana misy sofiny be. Kairo dia Nosedraina ny ADN hanamarinana ny taranany (s). Voamarina fa marina izany Doberman Pincher Haavo # 2 sy Alika mpiandry alemanina Haavo # 2. Ka amin'ny valiny dia azo antoka ny milaza fa ny ray aman-dreniny dia purebreds. TSY nisy karazany hafa hita. Alika mpamonjy izy, saingy raha ny fisehoany ivelany dia toa tsy kisendrasendra izy. Rehefa nahazo azy tamin'ny famonjena aho dia 76 lbs. ary nanombana izy ireo fa 9-11 volana izy. Manana toetra sy fiasa marobe izy izay manondro ny karazany Doberman (fandokoana, palitao sy tongotra) ary ny hafa izay manolo-tena amin'ny Mpiandry Alemanina (rambony, sofina ary faharanitan-tsaina). Milanja kely avaratry ny 150 lbs izy. !!! Alika malemy fanahy nefa miaro izy manana toetra be fitiavana mahatalanjona. Tiany ny saokany tratra antitra !!!! Tena lava loatra ity lehilahy ity ka afaka milelaka ny kaontera nefa tsy mila miarina amin'ny tongony aoriana ary afaka mijery fefy 6 metatra mora foana. '
Doberman Shepherd Sary 1
Malagasy bulldog Olde anglisy bulldogge Mix
alika kely pyrenees st amidy
fifangaroan'ny alika mpiambina hetra manga
lisitra mpiompy mpiompy alemanina